Home Wararka MW Axmad Karaash oo ku baaqay isku soo baxyo Roobdoon
MW Axmad Karaash oo ku baaqay isku soo baxyo Roobdoon
Madaxwayne ku xigeenka Puntland Axmed Karaash ayaa soo saaray war-saxaafadeed ku socda dhamaan Gobolada Puntland kaasi oo uu ku farayo shacabka inay salad roobdoon ah iskugu soo baxaan.
Nuqul ka War-saxaafadeedka ayaa sidaan u qornaa
Ku : Wasaaradda Cadaaladda, Arrimaha Diinta, Dastuurka iyo Dhaqancelinta Dawladda Puntland.
Ku : Wasaaradda Arrimaha Gudaha, Federaalka iyo Dimuqraadiyaynta Dawladda Puntland.
Ku : Dhammaan Guddoomiyayaasha Sagaalka Gobol ee Dawladda Puntland.
Ku: Dhammaan Guddomiyayaasha Degmooyinka Puntland.
Ku: Culuma Awdiinka iyo Bulsho Waynta Puntland.
Og: Taliska Guud ee Ciidanka Booliska Dawladda Puntland
Og: Wasaaradda Amniga iyo DDR-ta Dawladda Puntland.
Ujeeddo: Baaq isu soo baxyo Roobdoon.
Ka dib safaradaydii aan ku marayey qaybo ka mid ah Gobolada Puntland oo aan ugu kuurgalayey xaaladda nololeed iyo amni ee ay ku sugan yihiin Bulshada aan Masuuliyadda u hayno.
Aniga oo dareensan saamaynta baaxadda leh ee abaarta ba’an ee ka jirta guud ahaan Soomaaliya iyo si gaar ahba Dhulka Puntland.
Aniga oo dareensan kana xun dhibaatada Biyo iyo Baad la’aanta ah ee ay ku sugan yihiin in badan oo ka mid ah reer guuraageenna iyo xoolaheenna aynu dhaqanno oo laf dhabar u ah nolosheenna iyo dhaqaalaheenaba.
Hadaba aniga oo ka jawaabaya baaqyada isdaba joogga ah ee Culumo-awdiinka iyo wax garadka Puntland , dareensanna baahida loo qabo in la qabto isu soo baxyo roob-doon iyo Alla bari ah, waxaan Maalinta Sabtida ah oo taariikhdu tahay 30-04-2022 u asteeyay maalin roob-doon ah.
Waxaan culumo-awdiinka sharafta badan ka codsanayaa in ay hoggaamiyaan roob-doonta iyaga oo kaashanaya masuuliyiinya Wasaaradda Cadaaladda iyo Masuuliyiinta Dawladda ee heer Gobol iyo Degmo, bulshadana fariinta ka gaarsiiyaan Masaajidda xiliyada Saaladaha si gaar ah Salaadda Jumcaha.
Waxaan ugu baqayaa Bulsho waynta reer Puntland in ay isugu soo baxaan roobdoonta, gacmahana Eebe u hoorsadaan kana baryaan in Eebe ugu naxariisto raxmaddiisa.
Waxaan ILLAHAY ( SWTC) ka baryayaa , kana rajaynayaa in uu innaga aqbalidoono Roob-doonta iyo Alla barigeennaba.
Ugu danbayntii: Roob doonta darteed waxaa Maalinta Sabtida ah fasax ah dhammaan Xafiisyada Dawladda ee heer Dhexe, Gobol iyo Degmo.
Waxaan farayaa dhammaan laamaha amniga heerarkooda kala duwan xoojinta iyo sugidda amniga goobaha dadwaynuhu isugu soo baxayaan.
Previous articleSacdiyo Yaasiin Samatar oo ku guuleysatay Guddoomiye kuxigeenka koowaad ee BF
Next articleCismaan Atooraha oo lagu dilay xeebta Liido oo Muqdisho
Yariisow “Siyaasiyiin xaasidiin ah ayaa caqabad ku ah Gobolka Banaadir” (Dhageyso)
Shacab lagu xasuuaqay dulleedka Gaalkacyo